टाउको किन दुःख्छ? यसरी बच्नुहोस् - Yohosamachar
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रायः मानिसले आफ्नो जीवनमा एक या एकभन्दा बढीपटक टाउको दुखाइको समस्या भोगेका हुन्छन् । टाउको दुख्नुका कारण सामान्यदेखि प्राणघातकसम्म हुन सक्छन् ।
चिकित्सकहरूले जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई टाउको दुख्दा सामान्य रूपमा एकपटक आँखा जचाउन सल्लाह दिने गरिन्छ । प्रायः टाउको दुख्नुको कारण आँखासम्बन्धी समस्याले नै हुन सक्छ । आँखाको जाँचपछि वा आँखाको समस्याको उपचारपछि पनि टाउको दुख्न नछाडे समस्या अर्कै हुन सक्छ । यो अवस्थामा टाउको दुख्ने कारण यस्ता हुन सक्छन् :
यो सामान्य रूपमा हुने टाउको दुखाइको एक प्रकार हो । यस्तो प्रकारको दुखाइमा व्यक्तिले आफ्नो टाउको केही कपडाले कसेर बाँधेझैँ महसुस गर्छन् ।
माइग्रेन आफैँमा व्यापक विषय हो । सामान्य बुझाइमा यसलाई आधा टाउको दुखेको पनि भनिन्छ । यो प्रकारको दुखाइमा टाउकाको कुनै एक भाग (कहिले दाहिने, कहिले देब्रे) दुख्ने गर्छ । यो अवस्थामा वाकवाकी आउने, बान्ता हुने, उज्यालोमा हेर्न असहज हुनेजस्ता समस्या पनि हुन्छ ।
यो प्रकारको टाउको दुखाइ थोरै मानिसमा मात्रै हुने गर्छ । दिनमा कुनै एक समयमा दुख्ने र फेरि निश्चित समयको अन्तरपछि दुख्ने लक्षण देखिन्छ । बिरामीले यो प्रकारको दुखाइमा जीवनकै सबैभन्दा बढी दुखाइको रूपमा चित्रण गर्छन् ।
कस्तो दुखाइमा डाक्टरकहाँ जाने ?
टाउको दुखाइ कम गर्न
टाउको दुखे वा दुख्लाजस्तो भए दैनिक जीवनमा निम्न विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । केही पाटोमा विचार पुर्‍याए दुखाइ केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।
० दीर्घकालीन रोगहरू, जस्तैः मधुमेह, उच्च रक्तचापलगायत समस्या छ भने नियमित जाँच गराउने
थप यसको समाधान के त?
गेडागुडीमा ‘म्याग्नेसियम’ जस्ता फाइदाजनक खनिजपदार्थ धेरै मात्रामा पाइन्छ, यसले शरीरका माशंपेसीहरूलाई आराम प्रदान गर्दछ।
हाम्रो शरीरमा म्याग्नेसियमको मात्रा कमी भयो भने मस्तिष्कमा रगतको चाप कम हुने तथा रगतमा सुगरको मात्रा कम हुने हुन्छ, जसले गर्दा टाउको दुख्ने समस्या निम्त्याउने चिकित्सकहरूको धारणा रहेको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले खोज गरेअनुसार धेरैजसो माइग्रेन ग्रसितहरूमा म्याग्नेसियमको मात्रा कमी भएको देखिएको छ। म्याग्नेसियम प्रशस्तै पाइने अन्य खाद्यपदार्थहरूमा हरियो सागपात, गोलभेडा, आलु, जौ, फापर, आदि पनि पर्दछन्।
कडा बासना भएका पर्फ्युम, आफ्टरसेभ, साबुन, एयर फ्रेसनर तथा घरायसी सामान सफा गर्ने कुराहरूमा हाम्रो नाकमा भएका स्नायू कोषहरूलाई सक्रिय गराउने रसायनिक पदार्थहरू हुन्छन्।
ती स्नायू कोषहरूको सिधा सम्बन्ध मस्तिष्कसँग हुने गर्दछ। कतिपय व्यक्तिहरूमा यसले गर्दा कडा टाउको दुख्ने समस्या हुन जान्छ। त्यसैले यदि फ्रेसनर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने झ्यालबाट हावा छिर्न दिनुहोस् र रसायनबिहीन फ्रेसनरको प्रयोग गर्नुहोस्।
आफ्नो शरीरको स्वास्थ्यभन्दा महत्वपूर्ण अरू केहि पनि हुँदैन। शरीर नै नरहे अरू के कुराको मतलब हुन्छ र? त्यसमाथि निन्द्रा भनेको त शरीरलाई नभई नहुने कुरा हो।
दिनभरीको काम र व्यवहारले हामी शारीरिक तथा मानसिक दुवै तवरले थकित भइरहेका हुन्छौँ, त्यस्तो बेलामा शरीरलाई आरामदायी निन्द्राको खाँचो पर्दछ।
← ग्याष्ट्रिक: समस्या तथा समाधानका घरेलु तरिका
मृगौला स्वस्थ राख्ने सूत्र →